Relationship Hub - Torohevitra momba ny fifandraisana maimaim-poana avy amin'ny manam-pahaizana
Torohevitra momba ny fifandraisana maimaim-poana avy amin'ny manam-pahaizana
in psikolojia, quiz
[QUIZ] Namana ratsy ve IA?
Ny hoe namana ratsy dia ratsy nefa fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny olona dia ny tena namana ratsy fa tsy ny olon-tiany? Azoko fa mety ho hafahafa izany ary izany no antony namoronanay ity fanontaniana quiz fohy ity mba hanampiana anao handray fanapahan-kevitra tsara. Amin'ity quiz ity dia nandamina fanontaniana manan-danja vitsivitsy izahay […] Bebe kokoa
by rhb nohavaozina 10:12 maraina, 10:12 maraina
Nahoana no betsaka ny olona mitady fahanginana?
Tianao ho fantatra hoe nahoana no betsaka ny olona mitady fahanginana fa tsy tabataba na tontolo mitabataba. Eny, avelao aho hizara aminao ity tsiambaratelo izay azoko antoka fa henonao betsaka tamin'ny olona tia fahanginana. Ny fahanginana dia manampy ny olona iray hiala sasatra, manampy ny nerveo ho tony rehefa mila […] Bebe kokoa
by rhb 8:18 maraina, 8:18 maraina
Nahoana ny toetr'andro mafana no mahatonga ahy hanahy?
Nanontany tena aho hoe nahoana ny toetr'andro mafana no manome tebiteby ahy ary ao anatin'izany dia nanao fikarohana be dia be aho mba hahitana hoe nahoana ary inona no azoko atao mba hanampiana ahy amin'izany ary amin'ny fizotry ny fikarohana dia mahita fomba maro aho. Izany no antony, ato amin'ity lahatsoratra ity, […] Bebe kokoa
by rhb 8:09 maraina, 8:09 maraina
Nahoana no zava-dehibe ny fahalalana ny tena?
Efa nanontany tena ve ianao hoe nahoana no zava-dehibe ny fahalalan-tena? Raha eny, avelao aho hanontany anao izao, efa nanapa-kevitra teo amin'ny fiainanao ve ianao taloha ary nieritreritra ny zavatra nataonao raha fanapahan-kevitra tsara na tsia? Dia izay no fahalalan-tena any am-piasana. Tohizo ny famakiana. Azonao atao ihany ny mieritreritra indray ny […] Bebe kokoa
by rhb 8:06 maraina, 8:06 maraina
Mampitebiteby ahy ve ny kafeinina?
Matetika, rehefa mihinana kafeinina aho, dia hitako fa tena mavitrika amin'ny zavatra tiako atao aho, afaka miari-tory mandritra ny alina mba hanao zavatra, mailo sy mitebiteby aho miaraka amin'izay tsy misy antony ary rehefa mitranga izany. Manontany tena aho hoe “misy kafeinina ve no mahatonga ahy hanana […] Bebe kokoa
by rhb 7:59 maraina, 7:59 maraina
FANONTANIANA: Tezitra ve ianao?
Fomba entina manodinkodina ny olona ny fandoroana entona mba hametra-panontaniana ny amin’ny fahasahiranany. Na dia mety ho vaovao aza izany, saingy efa ela no nisy azy. Ny ankabeazan'ny olona amin'izao fotoana izao dia ataon'ny olona iray, na ny namany, na ny fianakaviany, na ny mpiara-miasa ary tsy fantany. Amin'ity quiz ity dia hanampy anao izahay […] Bebe kokoa
by rhb nohavaozina 3:09, 3:09 alina
Ahoana no hahatongavako ho matanjaka ara-tsaina?
Ny fomba hahatongavako ho matanjaka ara-tsaina dia fanontaniana tokony hapetraky ny rehetra satria tsy misy na inona na inona azontsika atao eto amin'izao tontolo mifaninana izao ary mahomby raha tsy matanjaka ara-tsaina. Eny, marina ny henonao. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny hoe matanjaka ara-tsaina, noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity, […] Bebe kokoa
by rhb 12:05, 12:05 alina
Ahoana no hitomboako amin'ny maha-olona ahy?
Tsy fandriana raozy velively ny fiainana, tsy maintsy mitsangana sy miady amin'ny zavatra inoany ny tsirairay. Te-hahazo izany ianao eo amin'ny fiainana mba hanajan'ny olona anao tahaka ny fanajany ny hafa, tsy maintsy mitsangana sy miasa ho an'ny olona ianao. izany na avy aiza na avy aiza. Saingy […] Bebe kokoa
by rhb 12:00, 12:00 alina
Inona no endrik'ilay Narcissist?
Ny narcissist dia olona mibanjina tena. Olona manana ny zava-drehetra momba azy ireo foana. Mieboebo, miavonavona, sns, olona tia fahefana, saina, fiderana, sns, azo sokajiana ho mpampijaly. Mbola manontany tena ve ianao hoe manao ahoana ny endrik'ilay narcissist mampiasa ohatra? Dia azonay ianao. Ato amin'ity lahatsoratra ity, handeha isika […] Bebe kokoa
Inona no famaritana ny psychopath?
Rehefa avy nijery ny rakibolanao momba ny famaritana ny psychopath ianao dia mbola mitady fanazavana bebe kokoa momba ny famaritana ny psychopath ve ianao? Eny ary, eo amin'ny toerana mety ianao satria eto dia hovakiantsika bebe kokoa ary hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny psychopath. […] Bebe kokoa
by rhb 11:53 maraina, 11:53 maraina
Arahabaina. Tonga amin'ny faran'ny internet ianao.
Ahoana no mahasoa ny fahasalamako ara-tsaina ny fanatanjahan-tena?
Ahoana ny fanamboarana ny fanambadiana amin'ny narcissist [13 Torohevitra]
Fomba 12 hanamboarana fanambadiana aorian'ny lainga
Fomba 10 handaminana ny fanambadiana tapaka ara-baiboly
Fomba 12 hanamboarana ny fanambadiana eo amoron'ny fisaraham-panambadiana
Fomba 12 hanamboarana ny fanambadianao tsy misy toro-hevitra
Ahoana no handaminana ny fanambadianao rehefa rava ny fitokisana
Ahoana no avelanao handeha ary avelao Andriamanitra hanamboatra ny fanambadianao? [JEREO]
Ahoana no handaminana ny fitokisana amin'ny fanambadiana
Ahoana no handaminana ny fanambadiako amin'ny vadiko
Advice Misaraka Dating Dreams Gifts Holidays vazivazy Life Hacks Lifestyle Love fanambadiana Messages psikolojia Lalao Fanontaniana quiz Quotes Romance Sex Fampianarana
Aza manana kaonty? Register
Ho hitanao eto ny fanangonana rehetra noforoninao taloha.